ပုံလေးထဲက ကလေးရဲ့ အမေက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ?
HomeKnowledgeပုံလေးထဲက ကလေးရဲ့ အမေက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ?
ကလေးထိုင်နေတဲ့ ပုံစံကလည်း တိုက်ဆိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးက အမေနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေက အိမ်မှာ ဆော့ကစားနေတဲ့ အခါ အမေရှိတဲ့ဘက်၊ အမေမြင်နိုင်တဲ့ နေရာမှာတော့ ဆော့ရတာ ပိုကြိုက်ပါတယ်။ လုံခြုံပြီး အမေက စောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့ ကလေးတွေမှာ ခံစားရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။